आरक्षण पाएर ब्राह्मणहरु आज क्षमताको बहस गर्ने ठाउँमा आए , अहिले आरक्षणकाे विराेध किन ?
पाेखरा । आरक्षण ब्राह्मणहरुले पनि पाएकै हुन। पढ्ने आरक्षण। यो देशमा सबैले पढ्ने आरक्षण कहाँ पाए र? ब्राह्मणहरुले वेद पढे। पुराण पढे। कर्मकाण्ड पढे र कर्मकाण्ड गरे। दलितहरुले वेद पढ्न खोज्दा जिब्रो काटियो। सैयौँ वर्षको यही आरक्षणमा टेकेर ब्राह्मणहरु आज क्षमताको बहस गर्ने ठाउँमा आइपुगेका हुन।
मान्नुस या नमान्नुस। गरीबीकै मारमा परेका ब्राह्मणहरुको पनि चेतना भने तत्कालीन समाजमा सबै भन्दा उन्नत बन्न पुग्यो। ब्राह्मणहरुले टुप्पी नै कसेर पढे पनि उनीहरुले आरक्षण व्यवस्था भित्रै बसेर पढेका हुन। राज्यको राजनितिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाले गर्दा शिक्षा तुलनात्मक रूपमा ब्राह्मण/क्षेत्री मैत्री बन्न पुग्यो। परिणाम स्वरूप अध्ययनको आधारमा प्राप्त गरिने राज्यका अंगहरुमा उनीहरुकै वर्चस्व हुन पुग्यो।
आरक्षण लक्षित वर्ग समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन। उत्पिडित वर्गको आरक्षण उत्पिडित वर्ग भित्रका सामन्तहरुले पाइरहेका छन।
यस्तै प्रकारको आरक्षण क्षेत्री/ठकुरीहरुले पनि पाए। राज्य संञ्चालन गर्ने आरक्षण। सुरक्षा र सेना सञ्चालन गर्ने आरक्षण। कोही जन्मैले बहादुर हुने त होइन तर क्षेत्री/ठकुरीहरुलाई बहादुरीसँग जोडियो र अधिकांश क्षेत्री/ठकुरीले नाममै बहादुर लेख्ने परम्पराको विकास हुन पुग्यो। बहादुर लेख्ने परम्परा पछि दलित र जनजातीहरुमा पनि आयो तर राजनितिक संयन्त्रको आरक्षण दलितहरुमा पुग्न सकेन। आज क्षेत्री/ठकुरी समुदाय क्षमताको बहस गर्ने ठाउँमा एक्कासी आइपुगेका होइनन् । सैयौँ वर्षको आरक्षणले ल्याइपुर्याएको हो।
परिणाम स्वरूप उनीहरुको राज्यमा पकड झन बलियो बन्न पुग्यो। यसको अर्थ यो होइन कि देशका हरेक ब्राह्मण क्षेत्रीहरुले राज्य सञ्चालन गरे ।कतिले प्रत्यक्ष लाभ पाए कतिले पाएनन तर समाजमा उनीहरुको चेतना उन्नत बन्न पुग्यो। हामीहरुले आफूले पाउँदै आएको आरक्षण देख्दै नदेख्ने तर आज भोलि उत्पिडित वर्ग समुदायले पाएको आरक्षण मात्र देख्दा बुझाई अपुर्ण हुन्छ।
रेग्मी निबर्तमान केन्द्रीय सचिब अखिल(क्रान्तिकारी)